Madaxweyne Shariif Xasan Shiikh Aden oo la filayo in uu berri iscasilo iyo KG oo gashay marxalad cusub oo siyaasadeed – Radio Daljir
Noofember 5, 2018 5:04 g 0
Wararka Radio Daljir ka helayo ilo ka agdhow Madaxweynaha Dowladda Koonfur Galbeed, Madaxweyne Shariif Xasan Shiikh Aden, ayaa Radio Daljir la qaybsaday in la filayo in uu madaxweynuhu iscaliso doono maalinka berri ah. Haddii madaxweyne Shariif Xasan uu iscaliso waxaa xilka madaxweyne si ku-meel-gaar ah ula wareegi doona Guddoomiyaha Baarlamaanka Dowladda Koonfur Galbeed Md. Cabduqaadir Shariif Sheekhuna Maye.
Iscasilaadda la filayo ee Madaxweyne Shariif Xasan ayaa xeeldheerayaasha siyaasaddu ku fasireen Shariifka oo ciyaaraya siyaasad xeeladaysan, maankana ku haya laba arrimood oo khalkhal galin doona siyaasadda iyo ammaanka dowladda Koonfur Galbeed.
Waa mar e, loolanka siyaasadeed ee ka aloosan dowladda Koonfur Galbeed ayaa hadda noqday loollan qabiil, una dhexeeya musharrax Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen), Wasiirkii hadda iscalisay ee Wasaaradda Tamarta iyo Biyaha ee DFS, iyo Musharrax Mukhtaar Rooboow abu-Mansuur (ama Musharrax Shariif Xasan oo dhanka qabiilka ay Mukhtaar Rooboow isku saf yihiin).
Musharrax Lafta Gareen ahna Xildhibaan Federal ayaa ah musharraxa Nabad iyo Nolol, waana musharrax haysta taageerada Madaxweyne Farmaajo iyo dowladdiisa. Musharrax Lafta Gareen waxa uu dhinac la dhiigyahay Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Shariif Xasan oo inta kore maanka ku haya, ogna in dhanka qabiilka uu Musharrax Mukhtaar Rooboow kaga xoogganyahay, loolankuna markaas yahay mid u dhexeeya laba jifo ayaa tartankiisa Madaxweyne u arka rajo-beel. Madaxweyne Shariif Xasan oo aysan isku jifo aheyn Mukhtaar Roobow ayaa kursiga Madaxweyne ee Koonfur Galbeed ku fadhiya miisaanka jifada Mukhtaar Roobow.
Waa marka labaad e, Madaxweyne Shariif Xasan ayaa ka welwelsan in faragalinta Madaxweyne Farmaajo iyo Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ay faragalinayaan doorashada Koonfur Galbeed in maanta loo arko mid qabiileysan, khatarna ku ah amniga, miisaankii siyaasadeed iyo kan qabaa’il ee Koonfur Galbeed.
Khataraha faragelinta ayaa la rumeysanyahay in Shariifku uu ka welwelsanyahay in ay horseedi karaan burbur ku yimaada dowladnimada Koonfur Galbeed, keeni kartana in loo kala jabo saddex qaybood iyo ka badan iyo siyaasad qabiileysan.
Shariifka ayaa u muuqda in uu mar tilmaamayo oo ka digayo khataraha siyaasadeed ee ku wajahan dowladda iyo deegaanka Koonfur Galbeed, marna uu muujinayo in uu yahay kan kaliya ee kala badbaadin kara qabaa’ilada Koonfur Galbeed.
Warar hoose oo Radio Daljir isla caawa helayso ayaa sheegaya in dhammaan masuuliyiintii xafiiska Madaxweyne Shariif Xasan ay dalka ka bexeen, taas oo tilmaameysa in waqtigii Madaxweyne Shariif Xasan uu gabaabsi yahay.
Tan iyo markii la doortay Madaxweyne Farmaajo waxaa muuqaneysa in uu culayska ugu weyn ee siyaasadeed uu saaray burburinta dowladaha xubnaha ka dowladda Federaalka. Dowladda Hirshabeele iyo Madaxweyne Awaare ayaa ah maamul fadhiid ah oo aan shaqayn, haddana si toos ah u hoostaga Villa Soomaaliya. Galmudug ayaan iyana yeelatay laba Madaxweyne iyo laba gole wasiiro, qarkana u saaran dagaal qabiileysan. Dhanka Jubaland oo doorashadu ku beegantahay bisha Agoosto 2019 ayaa ayana gashay marxalad cusub iyo mucaarad mideysan, dhan qabiil iyo dhan siyaasadeed, oo looga soo horjeedo Madaxweyne Axmed Madoobe.
Dhanka Puntland waxaa muuqda ifaafaalayaal musharrixiin dhowr ah, kuwa shaaciyey musharraxnimadooda iyo kuwa aan weli shaacinba, oo lagu tuhmayo in ay haystaan taageerada Nabad iyo Nolol iyo Madaxweyne Farmaajo. Puntland ayaan marnaba looga baqeyn burbur iyo dagaal qabiil toona, waxaana kaliya oo hadda la sugayaana waa aqoonsiga musharrixiinta Nabad iyo Nolol iyo Madaxweyne Farmaajo.
Guddiga Doorashooyinka Dowladda KMG ah ee Koonfur Galbeed oo Iscalisay (daawo)